Ny fampiharana mozika vaovao ho an'ny iOS 8.4 amin'ny horonantsary | Vaovao IPhone
Apple dia nandefa beta vaovao ora vitsy lasa izay, amin'ity tranga ity ny voalohany amin'ny iOS 8.4, miaraka amina zava-baovao iray izay miavaka amin'ny ambiny: fampiharana mozika vaovao, nohavaozina tanteraka, miaraka amin'ny lahasa mazava kokoa sy mora ampiasaina kokoa, miaraka amina mpilalao mini vaovao sy lisitra lava an'ny vaovao izay hasehonay anao amin'ity lahatsoratra ity sy amin'ny horonan-tsary.
Rehefa manokatra ny fampiharana ianao dia efa miavaka ny endrika vaovao. Miaraka amin'ireo rakikira farany izay vao nampidirinao teo an-tampony ary ny ambiny eto ambany ihany. Azonao atao ihany koa ny mandamina ny tranombokinao arakaraka ny rakikira, hira, mpanakanto ... avy amin'ny efijery iray ihany, fa tsy mila manova kiheba. Tsy mila mivezivezy amin'ny menus samihafa intsony ianao vao afaka milalao hira, satria ny fanindriana ny fonony mivantana dia hanomboka hilalao. Ao amin'ny efijery playback ankehitriny dia azonao atao ny mandefa ny mozika lalaovina amin'ny alàlan'ny AirPlay mivantana, tsy mila miala amin'ny efijery. Ny mpilalao kely dia ho eo foana mandritra ny efijery samihafa amin'ny fampiharana, eo ambany.
Rehefa miditra amin'ny mozika mpanakanto rehetra ianao dia hiseho amin'ny habe be ny sarin'ilay mpanakanto. Azo atao ny mamerina mandahatra ny lisitra "Up Next" avy amin'ny efijery mihitsy, misintona ireo hira samihafa handaminana azy ireo araka ny itiavanao azy. iTunes Radio koa dia manova ny fisehony, manamora ny fidirana mozika vaovao hahitana azy. Ireo gara izay henonao indrindra dia hiseho eo an-tampony ihany koa. Ao amin'ny foibe fanaraha-maso dia azonao atao ny manisy marika ny hira ho tianao na miditra amin'ny iTunes hividy azy.
Volavola vaovao tanteraka izay asehonay anao eto ambany amin'ny horonan-tsary iray mba hahitanao ny tanana voalohany an'ity rindrambaiko mozika vaovao natombok'i Apple ao amin'ny iOS 8.4 Beta ity. Araka ny filazan'ny Apple azy manokana dia "kinova preliminary" sy "vao nanomboka ny mozika«, Betsaka kokoa ny fanovana kasaina hatao amin'ny beta ho avy mandra-pahatongan'ny kinova farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ny fampiharana mozika iOS 8.4 vaovao amin'ny horonan-tsary
Jimmy dia hoy izy:
Mandehana fako, nandritra ny fotoana ela dia nafeniko ny bokotra mividy ary raha tsy hitan'izy ireo tsara izany dia vaky izy ireo, isaky ny miharatsy izany ary isaky ny tsy tiako ilay izy ary ny zavatra hafahafa dia avelako hametraka mozika ianao Tsy novidiana tamin'ny iTunes, Ho tsy izany raha tsy nivarotra sombin-javatra izy ireo, fa raha miankina amin'izy ireo, raha fintinina, fiovana be dia be sy fahatezerana maro izay miaraka amin'ny fiovana avy amin'ny sary ho sary tsy ananany Atsipazo tsara izy io, shit of minimalism of the ball ...
Valiny tamin'i Jimmy
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny an'i Cydia raha tsy nahy fafafao ilay izy
Audiobooks dia nifindra tany iBooks miaraka amin'ny iOS 8.4